Ayilotyala Labo, Yeyakho | Martech Zone
Ayisosiphoso sabo, sesakho
NgoMvulo, Agasti 21, 2006 NgoLwesibini, Agasti 22, 2006 Douglas Karr
Ndizifumana ndisembindini wencwadi yokuzinkcinkca kwakhona, ndine ezine kwipleyiti yam ngoku.
Ndachola Incinci yiNkulu enkulu, nguSeth Godin, kule mpelaveki. Sele ndiyonwabele nangona umnumzana uGodin endothuse. Ukuba bendifundile kancinci ngale ncwadi, ngendiqaphele ukuba izinto ezi zihlanganisiweyo zomsebenzi wakhe… ndicinga ukuba kufana nokumamela 'iiHigstest Hits', kumnandi ukuva zonke iingoma… kodwa uzibuze ukuba kutheni mamela nje zonke ii-cd onazo eshalofini.
Ekupheleni kosuku, ndilibale okuninzi endikufundileyo okanye endikuvileyo kuMnumzana Godin. Yinto sonke esihluphekayo kuyo. Ukhumbula malini kwincwadi nganye? Ngethamsanqa, ndithenga ii-hardcovers kuba ndihlala ndithatha iincwadi ezindala kwaye ndikhangela kuzo ukukhuthaza kunye nemibono. Le yenye yezo ncwadi. Ukuba ndingakhetha nje le ncwadi kwaye ndifunde isicatshulwa endiza kuthetha ngaso, iyakuba ilungile amaxesha ali-10 endihlawule ngawo.
Umnumzana Godin ngumbhali onetalente emangalisayo-uhlala ebeka ezona meko zinzima kumagama alula onokuwenza. Akukho baninzi abanye ababhali abakhuthaza indlela enza ngayo. Kwaye ndiqinisekile ukuba akukho baninzi abanye ababhali abanoku kulandelayo okwenziwa nguMnumzana Godin. Ukufunda kwakhe akuxeleli ukuba wenza ntoni akulunganga okanye kulungile, ubuza nje imibuzo kwaye achaze izinto ezikwenza ujongane neemeko zakho ngqo.
Kwiphepha 15, uSeth uthi:
Ukuba abaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo abamameli, ayilotyala labo, lelakho.
Oko kusenokungavakali ngathi kukhulu Wowu, kodwa ngokwenene kunjalo. Isiteyitimenti sinokuthi siguqulwe sibe zizakhiwo ezahlukeneyo:
Ukuba abathengi bakho abanakho ukusebenzisa isoftware, ayilotyala labo, lelakho.
Ukuba ithemba lakho aliyithengi imveliso, ayilotyala labo, lelakho.
Ukuba abayindwendweli iwebhusayithi yakho, ayilotyala labo, lelakho.
Ukuba abasebenzi bakho abamameli, ayilotyala labo, lelakho.
Ukuba umphathi wakho akamameli, ayilotyala labo, lelakho.
Ukuba isicelo sakho asisebenzi, ayilotyala labo, sesakho.
Ukuba iqabane lakho alimameli, ayilotyala labo, lelakho.
Ukuba abantwana bakho abamameli, ayilotyala labo, lelakho.
Ukuba awonwabanga, ayilotyala labo, lelakho.
Ndicinga ukuba inqaku yile, zithini nina Ndiza kwenza ntoni ngayo? USeti uyaqhubeka:
Ukuba ibali elinye alisebenzi, tshintsha into oyenzayo, hayi indlela ongxola ngayo (okanye whine).
Guqula okwenzayo. Unamandla okutshintsha. Utshintsho aluthethi ukuba kuya kufuneka uyenze wedwa, nangona. Cela uncedo ukuba uyalufuna.
Asingomzamo owothusa abantu